Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Mee mmemme obi ụtọ na St. Regis San Francisco
Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • nzukọ • News • Ịzụ ahịa • Tourism • Ego njem | Atụmatụ njem • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ememe ndị ahụ abịakwasịlarị anyị, St. Regis San Francisco ewepụtala akwụkwọ akụkọ mmemme maka ndị na-achọ njem ma ọ bụ sonye naanị na ahụmịhe iri nri nke Chukwu… ma ọ bụ abụọ! Ọ ga-adị mma ma ị hazie njem ị ga-aga obodo ọla edo dị n'akụkụ ọnụ mmiri, mechaa ịzụ ahịa gị, wee nwee mmasị mgbe ị nọ na ya?
St. Regis San Francisco dị na ebe kachasị mma maka ịzụ ahịa na iri nri na naanị ahụmahụ ezumike.
Ọ dịkwa nso na ebe ezumike skating na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie nke ụwa.
Site na asambodo onyinye Bloomingdales $100 gụnyere na ngwugwu ịzụ ahịa ezumike, ahụmịhe ịzụ ahịa na-akawanye mma.
Adreesị mbụ nke San Francisco maka ọmarịcha okomoko na ịdị mma na-enweghị oge, St Regis San Francisco, dị na ebe kachasị mma nke mpaghara obodo SoMa ma dị nso na ụlọ ngosi ihe ngosi nke ụwa, ebe ezumike ezumike, ịzụ ahịa, na ihe ndị ọzọ, St. Regis San Francisco bụ ebe zuru oke maka ndị ọbịa na-achọ ihe na-agaghị echefu echefu na nke mara mma. ahụmahụ ezumike.
Oge ezumike a, ụlọ oriri na ọṅụṅụ okomoko na-enye:
ngwugwu ịzụ ahịa ezumike
Ndị ọbịa ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere ike ide akwụkwọ pụrụ iche Ngwungwu ịzụ ahịa Bloomingdales dị ugbu a site na Disemba 28, 2021. Gụnyere na ngwugwu ahụ bụ ebe obibi mara mma n'otu n'ime ụlọ ndị ọbịa emegharịrị ọhụrụ na nso nso a, akwụkwọ onyinye $ 100 Bloomingdales, 15% kwụsịrị Bloomingdales kaadị nchekwa, akwụkwọ ịkpọ òkù onye na-azụ ahịa onwe onye, ​​Bloomingdales njem njem (akpụkpọ ụkwụ). akpa, mkpado akpa na akpa uwe), na ebe a na-adọba ụgbọala n'abalị. Ọnụ ego na-amalite na $626.
Ahụmahụ iri nri ezumike
Ahụmahụ iri nri nkeonwe, n'ime ụlọ, gụnyere nri nri nri nri 4 Prix Fixe dị maka ndị ọbịa na Ekele na Christmas Eve. Ndị njem nwekwara ike ịga leta Vitrine nke anọ nke ụlọ ahụ maka mmemme nri ehihie 3 Prix Fixe nwere njikọ mmanya abụọ ezumike. Na mgbakwunye, Vitrine ga-emeghe maka nri ụtụtụ pụrụ iche na Ekele na Christmas Eve ma ga-anabata brunch mara mma, zuru ezu na Mimosa na Bloody Mary activations na Christmas Day.
St Regis San Francisco na-enye ọnụ ụlọ na ọnụ ụlọ 260, ndị ụlọ ọrụ a ma ama na Toronto Chapi Chapo chegharịrị n'oge na-adịbeghị anya. Nhazigharị ahụ lekwasịrị anya na ịkwalite 15,000 square ụkwụ nke St. Regis San Francisco nke nzukọ na oghere mmemme, na-emepụta ebe a nụchara anụcha, dị mma na nke ọhụrụ emebere iji kwado mkparịta ụka na imekọ ihe ọnụ.
Banyere St. Regis San Francisco
St. Regis San Francisco meghere na Nọvemba 2005, na-ewebata akụkụ ọhụrụ nke okomoko, ọrụ na-adịghị mma, na ịma mma na-adịghị agafe agafe na obodo San Francisco. Ụlọ ala ala dị okpukpu 40, nke Skidmore, Owings & Merrill mere, gụnyere ụlọ obibi 102 na-ebili ọkwa 19 n'elu ụlọ 260 St. Regis Hotel. Site na ọrụ ndị na-egbu anụ akụkọ ifo, nlekọta ndị ọbịa “na-atụ anya” na ọzụzụ ndị ọrụ na-enweghị atụ na ihe eji enyere ndụ aka na ime ụlọ nke Chapi Chapo nke Toronto, St. Regis San Francisco na-enye ahụmịhe ọbịa na-enweghị atụ. St. Regis San Francisco dị na 125 Third Street. Ekwentị: 415.284.4000.